ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: လူနဲ့ခွေး၊ ခွေးနဲ့လူ
ဟုတ်ပါ့ ကိုပေါ၊ ပါးစပ်ထဲ ခွေးမွှေးတွေ ခွေးသန်းလှေးတွေ ဝင်ကုန်မှာစိုးလို့ နောင် ခွေးနှင့်ဖက်မကိုက်တော့ပါဘူး။ ခွေးသောင်းကျန်းတွေကို နောင်ခါ မျက်စေ့ရှုပ်လာရင် ဝါးရင်းတုတ်နဲ့သာ ဂိန်ဂိန်မြည်အောင် နှံရင်နှံ ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးပူနဲ့ပဲ ပက်ပါတော့မယ်။ ဟားဟား!
စိတ်ထဲမှာ ပြောချင်နေတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းပါပဲ။
ကျန်တဲ့ ဘော်ဒါတွေလည်း အဲ့ဒီလို သဘောထားနိုင်ဖို့ ထပ်မံ အကြံပြုပါတယ်။
This shows real attitude of blogger Ko Paw.
Most of the blogreaders(all are not from Army Side) dont like this kind of Ko Paw's bad attitude.
How to organise people (even in Singapore) to fight for Democracy.
Si Thu Aung , Engineer (working in singapore)
ကျနော့်အဖေကတော့ ဒီလို ပြောဖူးသဗျ။
တဲ့။ ဘက်ညှိလိုက်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ ထင်ပါတယ်။
If someone does not agree with ur post , u will say "DOG".
Every body can not agree what u wrote.
Si Thu Aung , Singapore
စည်သူအောင်.... ဘယ့်နှယ့်များ ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ကျနော့်ပို့စ်အပေါ် သဘောမတူတဲ့လူတွေကို ခွေးတွေလို့လည်း ဘယ်နံရောအခါကမှ ကျနော် မပြောခဲ့ရပါကလား။ ရှေ့က ပို့စ်မှာဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိတယ်လို့တောင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပြောထားသေးတယ် မဟုတ်လား။
မိတ်ဆွေလည်း ကွန်မင့်တောင် ဝင်ရေးနေနိုင်ပြီဆိုတော့ လူတယောက်ဆိုတာ အသေအချာပဲပေါ့။ ဒီတော့ လူဆိုရင် ခွေးနဲ့ ဖက်မကိုက်သင့်ဘူး၊ အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ယေဘုယျ မှန်ကန်တဲ့ နိယာမ သဘောတရားကို ပြောပြထားတာပါ။ ခွေးတွေကို နှိမ်လိုတဲ့သဘောနဲ့တောင် ပြောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ လူ့သဘာဝက ခွေးတွေလို ကိုက်ရခဲရတဲ့ သဘာဝ မဟုတ်ကြောင်းကို ပြောထားတာပါ။
ကျနော့်ရဲ့ ဒီပို့စ်ဟာ မရည်ရွယ်ဘဲ မိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်ကို အနာတရဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရင် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
Pls be human !
ကိုပေါရဲ့ အရင်ပို့စ် (related sanction) က တကယ်တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ကောင်းတဲ့ Issue လို့မြင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အလုပ်ထဲမှာ ခနနားချိန်ဖတ်ပြီးကတည်းက ကိုပေါနဲ့ မတူတဲ့ အမြင်ရှုဒေါင့်ကနေ brainstorm လုပ်တဲ့ အနေနဲ့အတတ်နိင်ဆုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးကြည့်မယ်လို့တောင် တွေးမိတာဗျ။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အလုပ်ကပြန်ရောက် အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဖတ်လိုက်ရော ဘုရားပွဲအပြီး အမှိုက်သရိုက်တွေတွေ မစင်တွေပေကျံနေတဲ့ ပွဲခင်းကိုကြည့်ရသလို စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာနဲ့ ကြိုးစားပမ်းစားရေးချင်စိတ်လဲ ပျောက်သွားတယ်။ ခွေးရူးတွေ ဟောင်တိုင်း စိတ်ထဲမထား လျစ်လျူရှုထားဖို့ လိုမှန်း သိပေမယ့် နားညီးလွန်းတော့လဲ အတော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဥပဒေကတရားသည်လို့ပြောတဲ့ သုခမိန် ဦးပေါ
ဦးပေါတို့ ဒီမိုဘလော့တွေကို ကျနော် မကြာခဏ လည်ပတ်ပါတယ်။ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို ဖတ်ရတဲ့ ဗဟုသုတရလို့ပါ။ ဘာသာတိုင်းဟာ ကောင်းအောင် သင်ပေးတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အယူဝါဒလေးတွေဟာ တကယ်ကို ထူးခြားဆန်းကြယ်လှတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေပါပဲ။ ဒီထဲမှာ ဦးပေါက သာလွန်သွားတာက ဥပဒေဟာ တရားတယ်လို့ ဆိုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအံ့သြမိတာကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာတောင် ပြည်နယ်အလိုက် ဥပဒေတွေက မတူညီပါဘူး။ အိန္ဒိယမှာ ဆိုရင် လမ်းတစ်လမ်းတဲအတူတူနေတဲ့ သူအချင်းချင်း မွတ်ဆလင်တွေက သီးသန့် ဥပဒေနဲ့ နေထိုင်ကြပါတယ်။ အဲလို အခြေအနေမှာ သုခမိန်ဦးပေါက . . ဦးအောင်ဆန်းဦးကို အိမ်ကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ ဒီမိုနိုင်ငံက တရားရုံးကို သုံးဖို့ အကြံပြုတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်ပြည်နယ် ဥပဒေကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးမလဲ? ဟိဟိ… ရွှေဥာဏ်တော တကယ်စူးရောက်တဲ့ ဒီမိုသမား ဦးပေါက တကယ့်သုခမိန် ကြီးကိုး။
ထားလိုက်ပါ.. ဦးပေါ ကျုပ်ကို စောင်းပြီးပြောနေတာ လူတိုင်းသိနေပေမယ့် ဒီမိုငတုံးတွေရဲ့ အကျင့်အတိုင်းပဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက ကျုပ်မေးထားတာလေးကို ဖြေစေချင်ပါတယ်။ 9/11 မှာ လူတစ်သောင်း အသတ်ခံရတာ အရေးမကြီးလို့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက မဆွေးနွေးပဲနေတာလား။ ဆင်းရဲသားနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလေးထားမေးမြန်းနေတာ သူတို့ အဖြူတစ်သောင်း အသက်ထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလို့ပေါ့နော်?
မင်းတို့ ဒီမိုတွေကလဲ တကယ်ကို ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ လူသားတွေပဲ။ ပြောတုံးက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးတာကို သဘောကြတယ်ဆို? လူတွေဟာ ဦးဏှောက် အမျိုးမျိုးနဲ့ အကျင့်စားရိုက် အမျိုးမျိုးရှိနေတော့ ကော်မန့်မှာ အရောင်စုံဖြစ်နေမှာပေါ့။ အတွေးအခေါ်တွေကလဲ ကောင်းတာရော.. ဆိုးတာပါ ရောနှောနေမှာပဲ။ မင်းပြောသလို ငါတို့ တင်ပြတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာ လွဲမှားတယ်ပဲထားလိုက်ပါ။ အဲဒါတွေကို ဥပက္ခာပြုပြီး မိမိသဘောထားကို ရေးပြရမှာပေါ့။ အခုတော့ မိမိစိတ်တိုင်းက ကော်မန့်ကို မရေးကြလို့ .. စိတ်တိုတယ် .. စိတ်ကုန်တယ်ဆိုပဲ။ စိတ်ကောက်ပြီးတော့ ကော်မန့်တောင် မရေးတော့ဘူးဆိုပဲ။ ဟားဟား။ ကလေးဆိုးကြီးပဲ။ မင်းတို့တွေ လိုချင်တာ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တဲ့ လူ့ဘောင်ဆိုတာ သေခြာရဲ့လား ပြန်စဉ်းစားဦးနော်. . . ငါနဲ့မတူရန်သူလို့ သဘောထားတဲ့ အဏာရှင် စံနစ်ကို မင်းတို့လိုချင်တာပါ။
အင်း... ကို စည် သူ အောင် တ ယောက် ကို ပေါ ရဲ့ ဘ လောဂ့် ကို အ ၀င် နည်း လို့ သော် လည်း ကောင်း သူ့ ရဲ့ အာ ဘော် နဲ့ အ ကျွမ်း တ ၀င် မရှိ လို့ သော် လည်း ကောင်း သူ့ ပိုစ့် တွေ ဆက် ခံ ရ တဲ့ ကော် မန့် တွေ ကို မ ဖတ် မိ လို့ သော် လည်း ကောင်း အ မြင် လွဲ နေ တာ ဖြစ် ပါ့ လိမ့် မယ် ။ တ ခါ က ၀က် ၀က် ကွဲ ဆဲ ပွဲ ကြီး ဆင် နွဲ တဲ့ ဘ လောဂ့် တ ခု ပေါ် လာ ဖူး တယ် ။ ဘ လောဂ့် ပိုင် ရှင် အ ဖွဲ့ က လည်း ဆဲ တယ် ၊ ကော် မန့် တွေ က လည်း ဆဲ တယ် (အ ခု တော့ ဘ လောဂ့် ပိုင် ရှင် တွေ အင် တာ နတ် နဲ့ ဝေး တဲ့ နေ ရာ ကို ရောက် သွား ကြ လေ သ လော တော့ မ သိ ဘူး၊ အ ခု အဲ့ ဘ လောဂ့် အ လုပ် မ လုပ် တော့ ဘူး )။ အဲ့ ဘ လောဂ့် မှာ ကို ပေါ ရဲ့ အ ခု ပိုစ့် ဆန် ဆန် အ ရေး အ သား ကို ဒို မိန်း ရဲ့ ဘယ် ဘက် အ ခြမ်း မှာ ရေး ထား ဖူး တယ် ၊ စာ သား ဆင် ဆင် တူ ပေ မယ့် ရင် ထဲ အ နှစ် သာ ရ မ တူ ဘူး ၊ ရင် ထဲ က ခံ စား ချက် မ တူ ဘူး ၊ ဆို လို ရင်း မ တူ ဘူး ။ ကို စည် သူ အောင် နား လည် မှု လွဲ သွား တာ ပါး-) ။
Dear Ko Paw, Just ignore who need to be ignored.Gyidaw
I think that "သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ alias Mr. ဆရာဇော်မျိုး" writes some sensible things although his sensible words are waterdowned in hateful phrases.
I do not like USDA or Than Shwe and I admire Daw Su. I am upset
that generals are not returning
Daw Su's truce. But at the same time I will never accept what everything oppositions said is
a gospel (as if to believe that
any written religious book is to
be accepted asatruth). So while this guy Zaw Myo may have been blunt, perhaps he might be even
a lunatic,abitter bum who is
lashing his anger to both sides,
I think he is talking half truth.
Your words will be accepted more when you will say in less emotional words. About those whom you hate, those who claim they
are Daw Su's followers to get
political asylm, refugee bumhood,
free tuition fees at universities, who form 1001 organizations issuing statements no one reads, who are begging or bashing Burma's dignity, who sucks Bo's dote.
They are nothing to do with Daw Su.
They are there pretending that they are Daw Su's followers because decent and educated
people like Ko Paw, Ko Si Thu Aung and perhaps half decent people like you do not haveachance
to work with her. If you do not like those who are crying 2nd
Daw Su (little hot chick in UK),
then kick them out from politics
by doing it. Do like Ko Aung San (who brought Ko Nu to ShweGonDai) did to take over the leadership
of Doe Ba Mar organization which was Tha Khin Ba Thaung's baby.
If you can present facts,
without colourful emotions and hate speech, that will make your
comments more readable and accepted! Change the style
if you think your substance
isagood shit.
အမည်မသိ November 18, 2010 6:33 AM
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် အမှားဆိုတာ ရှိမှာပဲ။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ မင်းတို့လို ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ဘာအမှားမှ လုပ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အေး.. ငါက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တဲ့သူ။ ဦးပေါတို့လို အသက်ကြီးကြီး အဖိုးကြီးတွေကို မရိုင်းသင့်ဘူးဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖနဲ့ ဒီမိုအဖိုးကြီးတွေရဲ့ စိတ်မှာ အမုံန်းအဃာတတွေပြည့်နှက်နေပြီး လူလိုပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာ မရှိဘူး။ အဲဒါကိုမင်းက သောက်မှန်းမသိပဲ သူတို့ကို လူလိုပြောခိုင်းနေတာ။ ဒီမယ် . . . ငါ့ကို သြ၀ါဒပေးချင်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသားရေး တာဝန်သိစွာနဲ့ ဒီမိုနဲ့ နအဖ အဖိုးကြီးတွေ စောက်တင်း စောက်ဖျင်းပြောပြီး ကလေးတွေလို ရန်ဖြစ်နေတာကို အရင်ဆုံး ၀င်ထိမ်းပေးပါ။ တာဝန်သိစိတ်ရှိတဲ့သူက ငါ့ကို သြ၀ါဒပေးတယ်ဆိုရင် သူ့စကားကို တလေးတစား နားထောင်မယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မလုပ်ပဲ ဟိုလိုလုပ်ပါ.. ဒီလိုလုပ်ပါဆိုပြီး သြ၀ါဒ ပေးနေရင်… မင်းကို စောက်ပေါလိုပဲ သဘောထားမယ်။ ရှင်းလား?
တာဝန်မဲ့ပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြော များကို အမြင်ကပ်သည့်
ကိုယ်တို့မြို့မှာဆို အခုလိုအချိန်မျိုးပေါ့ အရှေ့ဖက်က ဆောင်းလေ တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာ ခွေးတွေက ရှုးတယ်။ ခွေးလေ ခွေးလွင့်တွေက သိတယ်ဟုတ်။ စည်းကမ်းမရှိ နေချင်သလို နေ၊ ဟောင်ချင်သလို ဟောင်၊ လူပတ်ဝန်းကျင်မှာ ညစ်ညမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်၊ ဘယ်လူမှ ခွေးမထင်ဘူး ဟေ့ ဆိုသလို ပေါ့ အဟဲ
ဒီအချိန်မှာ အရံမီးသတ်ဆိုတဲ့ လူများက အသားသတ်သမား အပါနားထံ အမဲကျေ အလွင့်များ တောင်းယူပြီး ထိုအမဲသားများထဲတွင် သတ္တ၀ါများ သေစေနိုင်လောက်သော ပြင်းထန်သည့် အဆိပ်များ ခတ်ပြီးသကာလ၊ ခွေးအရှုးဟု ထင်ရသော ခွေးဂေါက်များကို ရှာဖွေ ကြွေးမွေးရပါသည်။
ယခုမူ အလွန့်လွန် ထူးဆန်းတဲ့ ခွေးဂေါက် တကောင် မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ပေါ်ပေါက်နေပါသည်။ ထူးဆန်းသည့်ဟု ဆိုရာဝယ် အနှီခွေးသည် အရပ်တကာ ပြေးလွားနေရသည့် ခွေးမျိုး မဟုတ်ပဲ ၊ အင်တာနက် သုံးတတ်နေသည့် ခွေးထူး ခွေးဆန်း မျိုး ဖြစ်သည်။ သိုးများကို ထိန်းကျောင်းတတ်သည်ဟု နာမည်ကြီးသော ဂျာမန်ခွေးမျိုးထက် အသိဥာဏ် နဲနဲ ပိုရှိသည့် ခွေးမျိုး ဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုခွေးသည် ပုံမှန်မဟုတ်တော့သဖြင့် လူကို ရန်ရှာတတ်သည်။
ခွေးနဲ့အပြိုင် မကိုက်ချင်ပါဘု.. အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါက ခွေးကောင်းတွေအပေါ် မြင်ရမဲ့ အနေအထား ဖြစ်မယ်။ အခုက ခွေးရှုးလေ...
ခွေးရှုးဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက မဲမဲမြင် ကိုက်တတ်သည်ဆိုတော့၊ လူအနေဖြင့် ကျိုတင် ကာကွယ်သမှုကို ပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့အတွက်ကြောင့် အွန်လိုင်းအမဲသား တတုံးရှာ၍ အဆိပ်လူးပီး ခွေးရှုးကို ကြွေးလိုက်သည့်ကသာလျှင် နတ်ရှင်လူ သာဓုခေါ်နေမည်သာ သေချာကြောင်း ....
အော် မေ့သွားတယ်။ အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်ရမှာ
OMG !!!!! DASSK got very good immature & sensitive fellowships .If they get chair & position like U Than Shwe , our life will tougher than U Than Shwe .We chased out to U Ne Win , then we get U Than Shwe who worse than U Ne Win.Hmmm.....
This blogger also condemned to NLD's logo Peacock and said " Phout Daung" , so we can see his attitude .Our country's situation won't step forward with such kind of people , it will stop at riots & chaos.I will happy and applause if Ko Min Ko Naing , DASSK & other policticians who try inside Myanmar are united with SPDC generals . I don't angry them , if they compromise with military and get position.Good luck Aunty Su and other polictians who suffer in prisons .See U Nu , finally he surrendered to U Ne Win , See Bo Kyaw Zaw , he is still not success and many examples during over 40years of revolution. I remember Khine Htoo's Song ( Nan Yan Ko Lat Thee nae htoe me tal) . Don't punch to the wall if u are not strong enough .:P:P
I am notamaster , I amalearner ...So, my thinkings may be wrong coz my ideas are oppose to democracy activists .har ha...:)
ဟုတ်ပါ့ဗျာ..စောက်ရူးဇော်မျိုး..ဒီကောင် ကနေဒါမှာမှာ..ဒုက္ခိတယောင်ဆောင်ပြီး ဒုက္ခသည်လုပ်နေပြီး..ဒီမိုကရေစီဘက်သားတွေဆဲနေတာ..ဒီကောင်ချီးလည်ပန်းလို့ ဖင်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတာတောင် ခုထိမရှက်သေးဘူး..
Unfortunately, neither I or anyone can calm them down. There will be fools and foul mouthed people. Not
us mortals, even persons like Daw
Su will not be able to shut them
up as most of them are using Daw
Su for their asylums and funds and
free rider bumhood. The point is
that having opportunists (like guys
and girls I know who have sent all
of their relatives to welfare states on the democratic cause),
fake leaders (like Pyi Thit Nyunt Wai or Maung Maung who wanted to
take the credit for monks' Saffron revolution), fools (who cried for
second or third Daw Su which some
watchers cringed), in opposition or pro-democracy side. On the generals' side there is Than Shwe and more mini Than Shwes and future Than Shwes in army and USDA.
But having those rogue and rotten elements on both sides do not mean
that we have to throw away all. It is still possible to admire Daw Su and follow her advice while looking own on fools and foul smelled bums and bastards. It is also possible to appreciate the role of army in future Burmese while disapproving some acts of Burmese army and while loathing some hardliner generals. I do not mind Daw Su working together with
generals and USDA as long as if that means it will be good for Burma.
Therefore if you were dreaming
that someone could intervene
such name callings and enlighten all fools and f..ked ups on both sides, you must beafoul mouthed fool too. Do not underestimate
the ingenuity of fools and enjoy
their foolishness as they can be
To Annon November 18, 2010 3:56 PM ,
Very sensible comment and I agree with you 100%.
As per your logic, I still love to read the comment section and appreciate those good comments although they are surrounded by the shitty comments.;)
Does the link below show Zaw Myo's picture?
we visit read your blog is to prevent people from bad ideas and misleadings.
@ Anonymous of November 18, 2010 6:23 PM.
That link shows the photo of this blog owner. It's not the photo of stupid zaw myo.
I doubt it! I think Ko Paw has
hair and that hot bi.tch with
plump ass looks like Zaw Myo.
He said he isaAnyar Theeian
and that fat chick with broom
looks like ANyar Thu Gyi with
a shaved head :). Is that ANyar
Thu Ma Gyee porn?
I don't think that photo is something to do with porn . I think the photo just perfectly reflect the name and character of blog owner.
Ye Naing said...
Mr Sayar Zaw myo
Why you used Saya?
What is your knowledge?
What is 'myanmarwaditakhingyi',what are you doing for myanmar?
I am happy because you are not in myanmar.If you have in myanmar ,we are country never will get development.Please never come back Myanmar.
I want to notice you,Never Visit to Myanmar Developing support side.You will need to see mental specialist.
တုံးလွန်း. .အလွန်းတဲ့ ဒီမိုငတုံး ye.naing14
မင်းတို့ ပြောတော့ နအဖက အဏာရှင်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်မပေးဘူး ဆိုပြီး စောက်တင်းပြောကြတယ်။ ငါက ဒီမိုအစိုးရတွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တာကို အကြောင်းပြချက်နဲ့ ရေးထားတယ်။ မှားတယ်ဆိုရင် အကြောင်းပြချက်နဲ့ ချေပလေကွာ။ အဲလောက် အခြေခံကျတဲ့ လူကျင့်ဝတ်လေးတောင် နားမလည်ဘူးလား? မိမိအကြိုက်ကို လိုက်မပြောရင် အကြမ်းဖက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တာလဲ ဒီမိုကရေစီတဲ့လား? ၀ါးဟားဟား။ ကျောက်ခဲကို ညှစ်ကြည့်ရင် ရေထွက်ကောင်း ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုငတုံးတွေကတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းနဲ့ ဖြေရှင်းတာ ဘယ်တော့မှ လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ သနားလိုက်တာ ဒီမိုငတုံးရယ်။
ကိုယ့် ကို မောင်းထုတ်လို့မောင်းထုတ်မှန်းနေ မသိ။ အလိုက်ကန်းစိုးမသိတာလား? နားလေးနေတဲ့ ခွေးရူးလား?
JEALOUSY FREE GUY said...
It's public published blog.
Nobody can Stop for others' opinions
If you are struggling for DEMOCRACY
you should welcome all critics.
Suu Kyi already said FREE SPEECH is part of DEMOCRACY after she released?
You will need to learn about Democracy.What is Democracy?
Democracy is not for revile.
(Democracy is not for revile. Respect each other.)
မင်းတို့ ဒီမိုတွေ စောက်တင်း.. စောက်ဖျင်းပဲပြောတတ်တယ်။ ပြောတိုင်းလဲ ယုံတယ်။ လိမ်လို့လဲ လွယ်တယ်။ သွေးမတော် သားမစပ် အဖြူတွေက အဖေအရင်းထက်တောင် သဘောကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတာ ဘယ်လောက်တုံးလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲလောက်အထိ ဦးဏှောက်က တပြားမှမရှိတာ။
ဘယ်လိုမှ လူလိုပြောလို့မရဘူး။ မင်းတို့မှာ ရိုသေစရာ အကြောင်းမှမရှိတာ။ ဘာအတွက်ရိုသေပေးရမှာတုံး? သနားတယ်။ ရိုသေခံစေချင်ရင်.. ဦးဏှောက်ကို သုံးပြီးပြော။ မင်းတို့ကောင်တွေမှာ ဦးဏှောက်သုံးပြီးပြောတာ တစ်ယောက်မှမရှိပဲနဲ့တော့ မရိုသေနိုင်ဘူး။ ရှင်းလား?
ဦးဏှောက်မရှိပဲ အဖြူတွေပြောသမျှယုံပြီး အလေးစားခံချင်သော ဒီမိုငတုံးများကို ဟားတိုက်နေတဲ့